Fetsy - Creativos an-tserasera | Creativos Online (Pejy 2)
Ahoana ny fametrahana layout amin'ny Word
Te hianatra ny fomba fisehon'ny Word ve ianao? Na dia tsy programa tsara indrindra hanaovana izany aza, dia afaka mahazo vokatra tsara ianao.
Ahoana no hanasongadinana lahatsoratra amin'ny PDF voaaro
Mila manipika ao anaty PDF mihidy ve ianao nefa tsy hainao ny manasongadina lahatsoratra amin'ny pdf voaaro? Hazavainay ny safidy anananao.
Manana sary be dia be ve ianao ary te-hanangona azy ireo ve ianao? Tsy azonao antoka ny fomba fanaovana collage misy sary? Manazava ny fomba hanaovana izany amin'ny fomba maro izahay.
Mamolavola hevitra ao amin'ny Power Point
Fantatrao ve ny hevitra famolavolana ao amin'ny Power Point? Fantatrao ve ny fomba fampandehanana sy ampiasana azy ireo? Tadiavo eto ambany ary mitahiry fotoana betsaka any am-piasana
Dingana hamoronana CV mahasarika
Indraindray dia voatery namorona CV mifanaraka aminay izahay saingy tsy fantatray hoe aiza no hanombohana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hazavainay aminao izany.
Ahoana ny fomba fametahana amin'ny Photoshop
Te-hahafantatra ny fomba blur amin'ny Photoshop ve ianao? Ireto ny dingana tokony hataonao sy ny vokatra ho azonao raha manao izany tsara ianao.
Ny kaody loko dia fampahalalana tena manan-danja ho an'ny mpamorona satria miaraka amin'izany ianao dia afaka mahafantatra ny karazana loko marina amin'ny endrikao.
Jereo hoe ahoana no hamadihana ny sary ho Word hanovana amin'ny fomba samihafa sy ny valiny azonao atao amin'ny tetikasanao.
Fantatrao ve ny fomba hanesorana ny sary avy amin'ny sary an-tserasera? Manome anao programa vitsivitsy izahay hahavita an'ity asa haingana sy mora ity afaka segondra.
Mila manala pejy amin'ny PDF ve ianao ary tsy mahalala ny fomba hanaovana azy? Jereo miaraka amin'ireo fitaovana maimaimpoana ireo fa mora sy kely ny vidiny.
Mila mamolavola ny fonony sy ny fonony aoriana ve ianao? Tsy hainao ny fomba? Omenay anao ny lakileny hahatonga azy io ho toy ny an'ny matihanina.
Efa nitety Internet ve ianao ary nahita endri-pitiavana tianao? Tsy fantatrao hoe loharano inona io? Manome fitaovana anao izahay.
Mandefa rakitra be dia be: inona no fitaovana maimaim-poana?
Mila mandefa rakitra be ve ianao? Manome anao safidy maromaro izahay hahazoana izany arakaraka ny haben'ny rakitrao sy ny fomba handefasanao azy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hamarana ireo fisalasalana rehetra ireo izahay ary hampianatra anao hikajiana ny haben'ny sary nomerika koa izahay. Aza hadino izany!
Raha tianao be ny Photoshop ary mampiasa borosy ianao dia fantaro hoe iza amin'ireo borosy Photoshop tsara apetraka maimaimpoana.
Raha te-hanery ny horonantsary ianao mba ho maivana kokoa ny lanjany ary azonao alefa amin'ny Internet, omenay anao ny lakileny hanaovana izany mora foana.
Te hahafantatra fomba fanaovana gif amin'ny horonan-tsary ve ianao? Aza manahy, eto izahay manome anao programa sy rindranasa hahafahanao manao izany ao anatin'ny minitra vitsy
Te hahay mamorona sary amin'ny Illustrator ve ianao? Manome anao safidy maromaro izahay hanatrarana azy mifanaraka amin'ny tanjonao.
Jereo ny fomba handehanana amin'ny JPG mankany amin'ny Word ao anatin'ny segondra vitsy monja ary amin'ny fomba tena samihafa mba hahafahanao misafidy izay mety indrindra aminao.
Ahoana ny fomba hamafana ny ambadika amin'ny Photoshop, tsikelikely
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianariko ianao amin'ny fomba hanaparitahana ny faran'ny sary amin'ny Photoshop miaraka amina fika tena tsotra. Vakio ny lahatsoratra!
Jereo ny fomba hanovana mora foana ny sary amin'ny PDF misy safidy hafa azo isafidianana. Safidio ny tsara indrindra ho anao!
Te hanova ny teny ho jpg ve ianao? Izahay dia manome anao ny lakile mba hahafantaranao ny endrika tsirairay sy ny programa samihafa mba hahatratrarana ny tanjonao.
Raha manana antontan-taratasy PDF ianao ary mila manova azy io ho Word, eto dia manome safidy maro anao izahay hamadihana rakitra PDF ho Word.
Raha toa ianao ka te hahafantatra ny typografikan'ny sary, sora-baventy ... ary tsy fantatrao, dia omenay anao ny lakilen'ny fanatanterahana izany.
Fahafahana vaovao amin'ny Photoshop hahafahana manova ny lanitra amin'ny tsindry tokana ary mamela antsika hanao fanovana mahatalanjona.
Misy andiana teknika hahatratrarana ny fifandanjana amin'ny asanao ary mifanaraka tsara ireo singa ao aminy. Ireto ny sasany amin'izy ireo.
Ianaro ireo teknika ireo hamerenana amin'ny laoniny ny fanakao sy hanavao azy io
Te hanavao ireo fanaka taloha izay tsy milaza na inona na inona anao intsony ve ianao? Amin'ity lahatsoratra ity dia hianaranao teknika famerenana amin'ny laoniny hazo hafa, andao handeha!
Mpandoko hosodoko maro nandritra ny tantara no nitaona ny zavakanto loko mandoko. Ampidiro ary fantaro ny teknika rehetra azonao ampiharina.
Fitsipika 10 ho an'ny famolavolana tsara
Ny filazana fa tsara na ratsy ny endrika iray dia mifototra amin'ny lalàna napetraka tamin'ny traikefa sy fandalinan'ny mpamorona maro.
Ampifanaraho amin'ny Adobe Color CC ny lokon'ny volanao.
Tsy mora ny misafidy ny loko, noho izany dia mitondra fitaovana iray izahay izay afaka manampy anao hahita ny fitambarana tonga lafatra, Adobe Color CC.
Ny rafi-pitsaboana reticule dia boky ilaina ho an'ny mpamorona satria mandidy ny volavolantsika izy ary manome azy ny fiaraha-miasa sy ny hatsarana. Mianara bebe kokoa momba azy.
Manolora kanto farany, fahalalana fototra
Tsy maintsy manolotra zava-kanto farany amin'ny mpanonta isika. Ilaina izy ireo mba tsy hisy pentina ny valiny. Mampianatra anao izahay hanao izany.
Squoosh dia rindrambaiko Google vaovao izay ahafahanao manery sary nefa tsy manary kalitao amin'ny fizotran'ny famatrarana.
Ny maha-zava-dehibe ny fanaovana Mockup tsara
Mba hahatonga ny mpanjifa hanaiky ny volavolantsika dia tsy maintsy manao fampisehoana tsara isika. Ianaro ny fomba ahazoana azy noho ny fanesoana.
Raha te ho tapa-kevitra amin'ny asa isika dia tsy maintsy mampiasa tetika. Ampianarinay hitsin-dàlana fitendry ianao hamonjy fotoana betsaka araka izay tratra.
Raha te ho tompon'ny Photoshop na Illustrator ianao dia mamporisika anao izahay hampidina ny sary miaraka amin'ireo hitsin-dàlana fitendry rehetra.
Mampianatra anao tetika izahay hahazoanao tombana ara-toekarena ireo tetik'asa noforoninao, ny dingana voalohany dia ny fametrahana vidiny amin'ny ora fiasana.
Ahoana ny fanesorana ny fikandrana mifantina loko ao amin'ny Adobe Photoshop rehefa manokatra sary
Raha te-hihoatra ny fotoana iasanao amin'ny Photoshop ianao dia azonao esorina ny fikandrana mifantina loko RGB rehefa manokatra sary.
Manaova tolo-kevitra momba ny asa aman-draharaha amin'ny fampahalalana fohy
Ny fampahalalana dia rakitra iray izay ahafahana mamorona tolo-kevitra voalohany ho an'ny famaritana ny tetikasa tianay hotanterahina.
Infographic, manehoa ny fahitanao azy bebe kokoa
Mila teknika hampitana vaovao mazava sy ara-pahitana ianao. Fampahalalana sy angona momba ny vondrona. Mpiara-miasa tsara ny infografika.
Doka voalohany nataoko tao amin'ny Google Adwords
Google AdWords no fitaovana fanaovana dokambarotra google. Hamela anao hamorona doka tsotra. Raha te-hiantraika amin'ny mpihaino kendrenao dia tsy maintsy ampiasainao izany.
Ny fisafidianana ny typeface marina dia manan-danja toy ny loko sy ny endrika anaovan'ny volavolanay, ireto dingana ireto dia afaka manampy anao hisafidy tsara
Betsaka ny mpamorona no variana amin'ny fanentanana rehetra tonga eny an-dalana, ireto fitaovana manaraka ireto dia hanampy anao hifantoka amin'ny asanao
Ny hetsiky ny multitasking dia voakasiky ny singa samihafa izay manelingelina anay, ireto teknika manaraka ireto dia hanampy anao
Nahoana isika no mila fifehezana mba hamoronana?
Zava-dehibe ny fananarana fifehezana amin'izao androntsika izao, ny asa tsotra toy ny fanamboarana ny fandriana dia afaka manampy antsika hanao izany, manome torohevitra vitsivitsy anao izahay hahatratrarana azy
Ampianarinay ianao hanodinana horonantsary amin'ny solosainao na findainao miaraka amin'ireo safidy sy fampiharana an-tserasera tsara indrindra ho an'ny Mac, Windows, iOS na Android.
Didy enina tsy maintsy atao alohan'ny fanolorana karatra fandraharahana
Tsy maintsy mahafantatra didy enina enti-miasa izahay hanaterana ny karatrao. Ireto didy folo ireto dia hahasoa hisarihana ny saina. Rehefa dinihina, fa raha manome karatra amin'ny napkin ianao dia tsy ho isa fahasoavana
Lalàna 10 hitarika tetikasa famoronana amin'ny ekipa miasa, mamorona tontolo iainana tsara sy mahatsapa ny tetikasa eo akaiky eo, ny fomba fitaomana azy, ny fomba hanentanana azy ary ny famoronana tontolon'ny fitokisana.
Raha misy hazakazaka lava kokoa noho ny fizaran-tany Formula 1, dia ny hazakazaka fikarohana Google. Ireto torohevitra 4 ireto dia hanampy anao hanakaiky ny toerana voalohany manomboka amin'ny fikambanananao manokana amin'ny orinasao.
Soso-kevitra NTT-Toner hanatsarana ny sanganasa noforoninao vita pirinty amin'ny masinina Rahalahy
Manana olana amin'ny famelomana ny tetik'asa mahafinaritra anao ve ianao noho ny tsy fahombiazan'ny mpanonta anao? Lahatsoratra iray nataon'ny NTT Toner manazava ny fomba hahazoana ny mpanonta printy anao hahafantatra cartridges mifanentana aminy.
Mamorona studio famoronana mahavariana hiaraha-miasa
Ny famoronana fandalinana famolavolana hamaha ny olana rehetra mety hitranga amin'ny ho avy dia sarotra, fa raha manaraka torolàlana tsotra sasantsasany isika dia afaka mahazo azy tsara amin'ny fotoana voalohany, toy ny fametrahana mpamokatra kafe.
Ireto fampiharana dimy ireto dia hamonjy anao amin'ny faharerahana
Ny havizanana mamorona dia zavatra mahazatra amin'izao androntsika izao. Noho ny habetsahan'ny asa takiana sy ny adin-tsaina amin'ny fiainana be atao. Misy ny rindranasa afaka manampy anao kely hamahana io havizanana famoronana amin'ny vola kely io.
Ny pensilihazo 500 an'i Felissimo dia napetraka ho singa haingon-trano
Efa nieritreritra ve ianao fa manana pensilihazo miloko maro ary mahamenatra ny fitahirizana azy ireo na mankaleo ambony latabatra fotsiny? Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny nataon'ny marika pensilihazo miloko mba hanehoana ny vokariny amin'ny fomba manintona kokoa.
Mametaka resadresaka miaraka amin'ireto toro-hevitra manaraka ireto amin'ny resume
Mametaka resadresaka miaraka amin'ireto toro-hevitra manaraka ireto ho an'ny resume. Amin'izany dia ho akaiky kokoa ny fahazoanao azy tsara sy akaiky ny asanao ianao.
Fahadisoana lehibe efatra izay manimba ny famoronana ataon'ny ankizy
Fahadisoana efatra izay manimba ny famoronana satria zanaky ny olon-dehibe manodidina antsika isika, mieritreritra fa tsy fotoana tokony hampianarana azy ireo zavatra sasany noho ny "fetrany".
Ny fisafidianana sehatra tsara ho an'ny orinasanao dia mety ilaina amin'ny Internet. Raha mamorona anarana diso isika na misafidy faritra diso, dia mety ho diso mandrakizay isika
Ny raikipohy novokarin'ny mpanora-dalàna tamin'ny fahagola sy ny mpamorona maoderina ho tonga amin'ny endrika famolavolana pejy tonga lafatra
Jereo ny elanelan'ireo loko misy ohatra amin'ny fampiasana sy fitambarana. Ny fanazaran-tena dia mahatonga ny fahalavorariana sy hamantarana haingana ny volavolan-doko ho an'ny kendrena dia mitaky fampiharana, fotoana ary fahalalana.
Mianara maka sary amin'ny teknika HDR izay mamoaka antsipirihany misimisy kokoa sy fampifanoherana amin'ny sary. Ampianarinay anao ny fomba fanaovana HDR amin'ny Photohsop
Ny ranon'orana dia mety ho tena izy toy ny namboarina tamin'ny sary sasany. Hanazava ny fomba hamoronana azy ireo izahay, ary ny fomba hanaovana azy ireo ho tena izy.
Androany dia hianatra mitsangatsangana amin'ny faritra rehetra eto amin'izao tontolo izao tadiavinao ianao, saingy ity dia ity dia tsy mila miala ao an-trano.
Mamitaha tanana amin'ny Photoshop.
Fetsy ho anao izay te hanao fanambarana momba ny tanana, hoho, fanadiovana. Na ho anao dia afaka miala voly fotsiny.
Ny fampisehoana lovia dia mety hahafinaritra sy haingana hanaovana. Ireto misy tetika vitsivitsy hanahaka takelaka feno amin'ny Photoshop.
Amin'ity lesona ity dia hampianatra anao izahay hanasongadinana singa iray, na faritra iray, avy amin'ny sisa amin'ny sary. Mamiratra bebe kokoa, loko kokoa, ny vokany tianao indrindra.
Efa naka sary ve ianao fa tavela tamin'ny jiro kely fotsiny na kely ny jiro noho ny tianao? Aza mamafa azy, eto izahay manampy anao manamboatra azy.
Fifandraisana amin'ny mpanjifa amin'ny famolavolana sary
Ny fifandraisana amin'ny mpanjifa amin'ny famolavolana sary dia lafiny iray lehibe raha te-ho afaka hiasa tsara kokoa amin'ireo mpanjifanay izahay.
Ny maha-zava-dehibe ny endrika amin'ny logo
Ny maha-zava-dehibe ny endrika amin'ny logo sy ny lokony mba hamoronana marika manokana azonao ekena erak'izao tontolo izao.
Ny fitaovana fanaovana atidoha na atidoha ho toy ny teknika hampivelarana tetik'asa sary dia tsara hanokafana ny saina ary hanampy antsika hamorona tetikasa.
Fitsipika momba ny interface ho an'ny famolavolana finday
Ny foto-kevitry ny interface ho an'ny famolavolana finday ilaina amin'ny tetikasanao amin'ny fampivelarana ny fampiharana an-tsoratra ary miaraka amin'ny faribolana ho an'ny besinimaro.
Meet Canva, programa famolavolana mora indrindra eran-tany
Meet Canva, programa famolavolana mora indrindra eran-tany. Ny fitaovana web vaovao ilainao hanamboarana mora ny volanao.
Torohevitra fototra 10 ho an'ny asanao voalohany amin'ny endrika mpamorona
Torohevitra tsotra 10 izay ho tonga mora ampiasaina mba ho tonga lafatra ny asanao voalohany ary toy ny matihanina amin'ny famolavolana ianao
Ny fitsipiky ny fijerena: dikany sy fiampangana an'ohatra amin'ny sary
Efa naheno ny fitsipiky ny maso amin'ny sary ve ianao? Hainao ve ny mampihatra azy? Mijanona aminay ary fantaro hoe inona izany.
Ny endrika mampifanaraka (endrika mamaly)
Ireto misy torohevitra 11 tokony hotadidina ao an-tsaina rehefa manamboatra endrika adaptatera tsara na famolavolana mamaly. Diniho tsara!
Endri-tsoratra sy ny fomba fitantanana azy ireo tsara
Amin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny endritsoratra sy ny fomba fitantanana azy ireo izahay, miaraka amina andiana torohevitra izay misy ny fanondroana ireo programa hanamorana ny fikambanan'izy ireo.
Torohevitra tena lehibe momba ny typografia ho an'ny mpamorona: ny fahamendrehana, ny loko, ny fanavaozana, ny hatsarana, ny habe ...
Torohevitra 10 hanidiana tsara ny fifanarahana tsy miankina
Cheats 50 ho an'ny mpamorona sy mpamorona tranonkala
Mpanamboatra tranonkala maro no matetika mampiasa fiteny fandefasana programa marobe, miaraka amin'ny kaody sy ny tarehin-tsoratra rehetra, ka maro izany ...
Trik Photoshop 16 ho an'ny vao manomboka
Tsy holazaiko aminao ny atao hoe Photoshop satria efa fantatry ny rehetra, na saika ny olona rehetra ...
Alohan'ny hamoronana sary famantarana dia anontanio ny mpanjifanao ireto fanontaniana 20 ireto
Rehefa nirahina hamolavola sary famantarana isika dia tsy tokony ho maika toy ny adala mihitsy ianao hanoritra sary, hevitra ary hanamboarana azy ...
Mamorona portfolio tsara amin'ny dingana 9
Sary: Artificalia In FreelanceWitch dia namoaka lisitry ny dingana 9 hanaraka izy ireo ka tena manana ...
Ao amin'ny bilaogy Usability Post dia namorona ity boaty mahavariana ity izy ireo niaraka tamin'ny fahatsapana nampitain'ny loko lehibe sy ny sasany ...
Tranonkala 40 ahafahanao mametraka ny volanao amidy
Efa nieritreritra ny hivarotra ny volavolanao ve ianao nefa tsy fantatrao izay tokony andefasanao azy ka ...
Tsy misy fampidinana miandry ao amin'ny rapishare
Ny fampidinana rakitra avy amin'ny RapidShare nefa tsy miandry, toy ny hoe manana kaonty Rapidshare Premium ianao dia zavatra atolotry ny tranonkala sasany toy ny:…